Honor 8 Pro, यो नयाँ Huawei प्रमुख हत्यारा हो Androidsis
Honor 8 Pro, यो Huawei को नयाँ प्रमुख हत्यारा हो
सम्मान जहाँ एक कार्यक्रम निर्धारित थियो Honor9को आगमन अपेक्षा गरिएको थियो। अन्तमा यो त्यस्तो भएको छैन किनकि निर्माताले एक हनर 8 प्रो प्रस्तुत गरेको छ, एक फोन जसले हामीलाई छोडिदियो धेरै राम्रा भावनाहरू छन् जब हामीसँग यसलाई प्रयोग गर्ने अवसर थियो.
हामी कुरा गर्दैछौं सम्मान 8 प्रो, एक सच्चा विशाल किलर कि एक डिजाईन र हार्डवेयर एक उच्च अंत को उचाई मा छ। तपाइँको सुरू मूल्य? 579 यूरो
Honor 8 Pro, यो निर्माताको नयाँ जनावर हो
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, Honor 8 को डिजाईन अघिल्लो मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो छ, यसको प्रत्येक pores मार्फत डिस्टिलि quality क्वालिटी। चाखलाग्दो अंश यसको शक्तिशाली हार्डवेयरको साथ आउँदछ। सुरू गर्नका लागि, Honor 8 सँग एकको एक पर्दा हुन्छ 5.7 इन्च आईपीएस प्यानल जसले QHD रिजोलुसन (२2560० × १1440०) र 515१XNUMX dpi प्राप्त गर्दछ।
हुड मुनि हामी Huawei मुकुट मा रत्न पाउन। हामी प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्छौं Kirin 960 आठ-कोर जुन सँगै १ जीबी र्याम मेमोरी यो फोनसँग शक्तिशाली पनि छ माली G71 GPU , भल्कानको साथ उपयुक्त, तपाईंलाई कुनै खेल वा अनुप्रयोग समस्या बिना नै सार्न अनुमति दिनेछ, उनीहरूले कति ग्राफिक लोडको आवश्यकता पर्दैन।
Honor 8 का सुविधाहरू जारी राख्दै भन्नुहोस् कि फोन छ GB 64 जीबी आन्तरिक भण्डारण, थप ,4.000००० एमएएच ब्याट्री द्रुत चार्ज प्रणालीको साथ। फोनको हार्डवेयरको पूर्ण वजनलाई समर्थन गर्न पर्याप्त र अधिक उल्लेखनीय स्वायत्तता भन्दा बढि।
अघिल्लो मोडेल जस्तै, यो Honor 8 प्रो एक सुविधा हुनेछ पछाडि अवस्थित डबल सेन्सर। ती मध्ये एक आरजीबी हो र colorsहरू क्याप्चर गर्नका लागि जबकि अन्य १२ मेगापिक्सेल सेन्सर मोनोक्रोम हो, जसले गर्दा राम्रो एक्सपोजर प्राप्त हुन्छ। हो वास्तवमा, LEICA को चिन्ह छैन यस मोडेलमा।
जे भए पनि क्यामेरा, के तपाईं 4K मा भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रतिज्ञा गर्दछ। यसमा हामीले जोड्नै पर्छ एन्ड्रोइड .7.0.० नौगट निर्माताको तह EMUI 5.1 अन्तर्गत, अघिल्लो संस्करणहरू भन्दा धेरै कम इन्टरफेस र त्यसले प्रयोगकर्ता अनुभवमा सुधार ल्याउँछ।
एक धेरै चाखलाग्दो फोन जुन अप्रिल २० मा ऑनर वेबसाइट मार्फत वास्तवमै चाखलाग्दो मूल्यमा मार्नेछ। 579 यूरो।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Huawei » Honor 8 Pro, यो Huawei को नयाँ प्रमुख हत्यारा हो
अब तपाईं एक ल्यागब्रेक मूल्यमा लेगू M8 प्रो आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ